Ogaden News Agency (ONA) – UN: Kumannaan Ayaa Ku Dhimatay Xasilooni Daridda Afghanistan Kajirta.
UN: Kumannaan Ayaa Ku Dhimatay Xasilooni Daridda Afghanistan Kajirta.
Posted by Daljir	/ February 15, 2016
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada shacabka ku waxyeeloobay colaadda Afghanistan ee sanadkii 2015-ka ay gaadhay heerkii ugu sareeyay. Tiradaasi ayaa boqolkiiba 4 ka sareysa tii sanadkii ka horeeyay, ayadoo 3,500 oo qof oo rayid ah ay sanadkii lasoo dhaafay dalkaasi ku dhinteen, halka dhaawacuna uu gaadhay 7,500 oo qof.
Madaxa xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay, Zeyd Racad Al-Xuseyn, ayaa sheegay in shacabka Afghanistan ay waxyelo kaso gaadhayso “ weerarro arxan darro ah oon mabda’ lahayn”. Waxa uu intaa ku daray in kuwa mas’uulka ka ah ay tahay in cadaaladda lahor keeno.
Tirooyinka ay soo bandhigtay Qaramada Midoobay ayaa muujinaya in boqolkiiba 62 ay dadkaasi waxyeelada kasoo gaadhay xooggaga ku kacsan dowladda, boqolkiiba 17 ay sababeen ciidammada dowladda, halka boqolkiiba 17 kalana ay ku waxyeeloobeen rasaas la isweydaasanayay.